जिज्ञासाहरू - सबै रूखहरू | सबै रूखहरू
रूखहरू धेरै जिज्ञासु बिरुवाहरू हुन सक्छन्। त्यहाँ संसारमा सबैभन्दा अग्लो जीवित प्राणीहरू छन्, अरू जो ढिलो बढ्छन्, र अरू जसको आयु 3000 वर्ष भन्दा बढी छ। ती सबैलाई थाहा पाउनुले तपाईलाई जहाँ राख्न चाहानुहुन्छ त्यहाँ राम्रो बढ्न सक्ने एउटा छनौट गर्न मद्दत गर्न सक्छ।.
तर हामी आशा गर्छौं कि तिनीहरूका गोप्य कुराहरू पत्ता लगाउनाले तपाईंलाई अझ बढी मन पराउन सक्छ। र यो हो कि त्यहाँ हजारौं प्रकारका रूखहरू छन्, र तिनीहरूमध्ये ठूलो संख्यामा, यदि सबै होइन, विशेषताहरू छन् जसले तिनीहरूलाई भव्य, सजावटी बिरुवाहरू, र प्रशंसाको योग्य बनाउँछ।
आक्रमणकारीले पनि आ–आफ्नो कार्यस्थलमा पूरा गर्छन् । तर, हामी सोच्छौं कि तिनीहरू भूत बन्नु हुँदैन, बरु थाहा छ र सम्भव भएमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
भित्री रूखहरू के हुन्?
घर वा फ्ल्याट भित्र रूख हुनु अझै उत्सुक छ, तर सत्य यो हो ...
यद्यपि धेरै जसो रूखहरू फूल्छन्, ती सबैमा साँच्चै आकर्षक र सजावटी फूलहरू छैनन्। तर त्यो होइन...
रूख र हथेलीहरू बीच +6 भिन्नताहरू
लामो समयदेखि, र आज पनि, यो पुस्तकहरू फेला पार्न सम्भव छ जसमा खजूरको रूखहरू रूखहरू हुन् भनेर भनिएको छ।
संसारमा कतिवटा रूखहरू छन् र तिनीहरूले प्रकृतिमा के कार्यहरू पूरा गर्छन्?
स्थलीय जनावरहरू भएकोले र, न्यानो रगतको साथसाथै, हामी तिनीहरूको पात र हाँगाहरू द्वारा प्रदान गरिएको छायाको कदर गर्छौं ...